Mucaarad Xumaha Maantu Waa Muxaafid Xumihii Shalay! W/Q;Cabdiraxmaan Cadami. | WAJAALE NEWS
Mucaarad Xumaha Maantu Waa Muxaafid Xumihii Shalay! W/Q;Cabdiraxmaan Cadami.
November 16, 2019 - Written by Editor:
Inta badan ma dhacdo umaddu sida ay u dhantay in ay isku aragti ka noqoto ama si u wada aragto arrimaha siyaasadda iyo sida ugu habboon ee dalka lagu maamuli karo; nidaamka iyo wadada loo marayo kobcinta dhaqaalaha, dhismaha kaabeyaasha, hagaajinta adeegyada bulshada, maamul wanaagga, la dagaallanka musuqmaasuqa iyo nooca xidhiidhka lala yeelanayo dawladaha gobolka iyo kuwa caalamka.
Waddannada dimuqraadiga ah aragtiyaha dadweynaha ee iska soo horjeeda waxa ku metela xisbiyo siyaasadeed oo mid kastaaba u taaggan yahay mabaa’dii iyo barmaamijyo u gaar ah oo uu dalka ku hoggaamin doono haddii uu doorashada ku guulaysto.
Xisbigu haddii se xisbigu guuldarraysto saaxadda kama baxo ee wuxuu qaata doorkiisa mucaaradnimo si uu xukunka ugu ilaaliyo xukumadda ka dhalatay xisbigii guulaystay iyo in uu isu habeeyo sidii uu ugu guulaysan lahaa doorashooyinka dambe.
Haddaba inkasta oo masuuliyiinta Qaranka ee la magacaabayo looga baahan yahay in ay buuxiyaan shuruudo aan la dhaafi Karin sida waxbarasho heer jaamacadeed, waayo aragnimo, karti, daacadnimo iwm, haddana madaxweyneyaashii JSL eek ala dambeeyay waxay xilal muhiim ah u magacaabeen rag aan u qalmin oo aqoontooda waxbarasho aad u hoosayso, maamulka dawladnimadana aan wax badan kala socon.
Masuulkan oo kale aqoontiisa gaaban wuxuu ku kabaa guulwadayn iyo raalli gelinta madaxweynaha si uu kalsoonidiisa u kasbado, waxa lagu gartaa muxaafadnimo dheeraad ah iyo ka badbadin, marka uu hadlayo wuxuu aad u buunbuuniya waxqabadka xukuumadda wuxuuna ku celceliya ammaanta madaxweynaha, inta uu xafiiskiisa joogu waxa ka badan inta uu ku maqan yahay madaxtooyada si uu u soo dhegodhegeeyo bal in uu madaxweynuhu soo wado wax isku shaandhayn ah ama in uu maqlo hadal haynta cid la damacsan yahay in shaqada laga eryo.
Bal haddaba u fiirso sida uu u dhaqmo marka xilka laga qaado:- hore ayaynu u soo sheegnay oo ma laha aqoon ama xirfad uu ku shaqo tago, kuma jiri jirin hawlo ganacsi oo uu dib ugu laabto, noloshiisii hore ee caadiga ahaydna lama qabsan karo, sidaas daraadeed maalmo yar kadib waxa la arkaa isaga oo dhalliilo tiro badan ka sheegaya xukuumaddii uu ka tirsanaa ee uu sida indho la’aanta ah u difaaci jiray.
Waa muxaafid xumihii shalay oo maantana mucaarad ah. Idho adayga iyo sida uu dhalliilaha xukumadda u tilmaamayo waxa u dheer hanjabaado, goolaaftan iyo hadallo aflagaaddo ah oo uu ku weerarayo maamulka iyo saaxiibadiisii ay wada shaqayn jireen. Wuxuu isu caleemo saara in uu yahay afhayeenka beesha uu ka soo jeedo isaga oo kicinaya dareenka reerka wuxuu tilmaama in ay dulman yihiin oo aanay maamulka dawladda ka helin saamigii ay xaqa ugu lahaayeen.